သတင်း - သံပြားဗူးများနှင့် ခဲထားသော သံဖြူဗူးများကြား ကွာခြားချက်ကို သင်မည်မျှသိပါသနည်း။
သံပြားဗူးနှင့် ခဲထားသော သံဘူးများကြား ကွာခြားချက်ကို သင်မည်မျှသိပါသနည်း။
Tinplate ဗူးများသည် ထုပ်ပိုးခြင်းလုပ်ငန်းတွင် လက်ရှိခေတ်ရေစီးကြောင်းဖြစ်သည်။သံပြားဗူးများသည် လှပသောအသွင်အပြင်နှင့် ပုံနှိပ်စက်များပါရှိပြီး ထုတ်ကုန်ကို ပိုလှပပြီး ဆွဲဆောင်မှုဖြင့် အလှဆင်နိုင်သည်။ဈေးကွက်ထဲမှာ သံပြားဗူးတွေ အမျိုးမျိုးရှိတယ်။ဘယ်ဟာကို အကြိုက်ဆုံးလဲ?တည်းဖြတ်သူသည် သံပြားဗူးများနှင့် ခဲထားသော သံဘူးများကြား ခြားနားချက်ကို အတိုချုပ် မိတ်ဆက်ပေးပါမည်။!
သံပြားနှင့် ခဲထားသော သံဘူးများ
1. သွပ်ပြားဆိုတာ ဘာလဲ။
Tinplate ဆိုသည်မှာ သံဖြူသံဖြူ သို့မဟုတ် ရိုးရိုးသံဟုလည်း ခေါ်သော သံဖြူကို ရည်ညွှန်းသည်။သံပြားဗူးများ၏စျေးနှုန်းသည် ယေဘူယျအားဖြင့် အေးခဲထားသော သံဗူးများထက် များစွာသက်သာပါသည်။အများအားဖြင့်၊ ပုံနှိပ်သောအခါတွင် ခဲမဖြူကို ဖြူစင်သောနောက်ခံဖြင့် ဖုံးအုပ်ထားမည်ဖြစ်ပြီး၊ ထို့နောက် အရောင်များကို ဤအဖြူရောင်နောက်ခံ၏ထိပ်တွင် ရိုက်နှိပ်ထားသောကြောင့် ပုံနှိပ်ထားသောအရောင်များသည် ပိုမိုတောက်ပလာမည်ဖြစ်သဖြင့် အပြင်ဘက်ထုပ်ပိုးမှုအနေဖြင့် tinplate ဗူးများကို လူများစွာက ရွေးချယ်ကြသည်။ ထုတ်ကုန်များ။
2. Frosted tin can ဆိုတာ ဘာလဲ။
မုန်လာဥနီနှင့် ဟင်းသီးဟင်းရွက် နှစ်မျိုးလုံးတွင် ၎င်းတို့၏ကိုယ်ပိုင် စိတ်ကြိုက်များရှိသည်။တချို့လူတွေက အရောင်တောက်တောက်တွေနဲ့ ပြည့်နေတဲ့ သံပြားကို မကြိုက်ကြပါဘူး။Frosted iron ကို silver light iron လို့လည်း ခေါ်ပါတယ်။မျက်နှာပြင်သည် သဲများဖြစ်သောကြောင့် ၎င်းကို Frosted iron ဟုခေါ်သည်။Frosted iron သည် tinplate ထက် များစွာစျေးကြီးသည်။ပုံနှိပ်ခြင်းမပြုဘဲ သံဖြူထုပ်ပိုးရန်အတွက် အများအားဖြင့် အသုံးပြုကြသည်။၎င်းသည် Frosted iron ၏ ပျော့ပြောင်းသော texture ကိုပေးသည်။
လက်ဖက်ခြောက်သေတ္တာ, အဖုံးပါသော သတ္တုသိုလှောင်အိတ်, စီဒီအစွပ်အလွတ်များ, စီဒီ အယ်လ်ဘမ် ဖြစ်ရပ်မှန်, Tin Cosmetic Containers, စိတ်ကြိုက် Tin Box,